Koorsooyinka Shaqada Madaniga - Geofumadas
Koorsooyinka Shaqada Madaniga ah
Moodellada dhijitaalka ah uga abuur sawirrada, softiweer bilaash ah iyo barnaamijka 'Recap' Koorsaddan waxaad ku baran doontaa sidii aad u abuuri lahayd ula macaamili lahayd moodallo dijital ah. -Calado moodhalka 3D adoo adeegsanaya sawirro, sida farsamada sawirada sawir qaadista oo wata drones. -Waxaad u isticmaashaa barnaamijka bilaashka ah ee loo yaqaan 'VDXXXX' iyo 'MeshLab' -Ku isticmaal AutoDesk Recap, -Ba u adeegsaneysaa Bentley ContextCapture, -Caruurta dhibic ...
Qodobbada, sagxadaha iyo iswaafajinta. Baro sida loo abuuro naqshadaha aasaasiga ah iyo laynka shaqada ee softiweerka Autocad Civil3D ee lagu dabaqayo Daraasadda iyo Shaqooyinka Madaniga ah Tani waa tii ugu horreysay ee koorsooyin 4 ah oo loo yaqaan "Autocad Civil3D ee Sahaminta iyo Shaqooyinka Madaniga ah" oo kuu oggolaaneysa inaad barato sida loo maareeyo barnaamijkan aadka u ballaaran ee Autodesk oo ku dabaq mid ka ...
Kaniisadaha, sagxadaha, qaybaha isgoyska, dhudhunka. Baro sida loo sameeyo naqshadaha aasaasiga ah ee la shaqeynta softiweerka 'Autocad Civil3D' oo lagu dabaqayo Daraasadda iyo Shaqooyinka Madaniga ah Tani waa tan labaad ee lagu soo diyaariyey koorsooyin 4 ah oo loo yaqaan "Autocad Civil3D ee Sahaminta iyo Shaqooyinka Madaniga ah" oo kuu oggolaanaya inaad baratid sida loo maareeyo barnaamijkan aadka loo jecel yahay ee Autodesk oo ku dabaq mid ka ...
Meelaynta horumarsan, sagxadaha, qaybaha isgoyska. Baro sida loo abuuro naqshadaha toosan ee aasaasiga ah iyo la shaqeynta softiweerka 'Autocad Civil3D' oo lagu dabaqayo Daraasadda iyo Shaqooyinka Madaniga ah Tani waa tii saddexaad ee lagu sameeyo koorsooyin 4 ah oo loo yaqaan "Autocad Civil3D ee Sahaminta iyo Shaqooyinka Madaniga ah" oo kuu oggolaaneysa inaad barato sida loo maareeyo barnaamijkan aadka u ballaaran ee Autodesk una adeegsaneysaa mashaariic kaladuwan iyo ...
Sharaxaada, bullaacadaha fayadhowrka, shirqoollada, isgoysyada. Baro sida loo abuuro naqshadaha aasaasiga ah ee la shaqeynta softiweerka 'Autocad Civil3D' oo lagu dabaqayo Daraasadda iyo Shaqooyinka Madaniga ah Tani waa tii afaraad oo ay ku jiraan koorsooyin 4 ah oo loo yaqaan "Autocad Civil3D ee Sahaminta iyo Shaqooyinka Madaniga ah" oo kuu oggolaaneysa inaad barato sida loo maareeyo barnaamijkan aadka u ballaaran ee Autodesk una adeegsaneysaa mashaariic kaladuwan ...